Izingobo Zomntwana - T TEL RELAY
Abantu bathuswe yividiyo "enyanyisayo" lapho ingane idliswa ngebhodlela…
TELES RELAY May 10, 2020 0
Ukunakekela izingane zakho yilokho umuntu angakulindela ngokusemthethweni kubazali abanothando. Kepha ukungazi nokungahloniphi kwesinye isikhathi kungaholela ezenzweni eziyingozi kakhulu kwabancane. Kukuvidiyo ...
Intombazane eneminyaka engu-13 ubudala ithi ikhulelwe ingane kababa wayo oneminyaka eyi-10 - INDLELA YOKUPHILA…
TELES RELAY May 8, 2020 0
Ukukhulelwa ezinganeni ezisakhula kuyinto engokoqobo eyinkimbinkimbi ehlanganisa izithikamezo eziningi zomzimba kepha nezingokomzwelo. E-Russia, intombazane eneminyaka engu-13 yakhulelwa yathi ubaba wayengeyena omunye ngaphandle kwakhe…
Umama owathola uCovid-19 ngaphambi nje kokubeletha ushona engakwazanga ukumbamba…
Naphezu kwezinyathelo eziningi ezithathwe ohulumeni zokunciphisa ukusabalala kwawo, i-coronavirus iyaqhubeka nokufuna izisulu. Ngenxa yezinguquko eziningi ezenzeka emzimbeni wowesifazane okhulelwe, lokhu kufanele…
[Ikholamu] Isikhonzi sibeka ingane yakhe emhlane, bese siphuka i-taboo - Jeune Afrique
TELES RELAY May 7, 2020 0
Ngokutatazela, uNgqongqoshe waseSierra Leone uDavid Moinina Sengeh ucela obaba ukuthi benze imisebenzi evame ukugcinelwa omama. ...
"Umzuzwana odabukisayo" Owesifazane uphuma koshongololo ezothola ukushona kwengane yakhe nengane yakhe…
TELES RELAY Ngo-Apr 29, i-2020 0
Umuntu unokuthambekela kwethemba lokuhle elimholela ekufihleni umqondo wokufa. Noma kunjalo yenzeka ngendlela exakayo uma ithinta inzalo noma othandekayo. Lokhu ukuhlukumezeka kwengqondo uBethany Leese adlula kukho…
Ingane ebishiywe ifile emgodini wokuhambisa indle itholakala ngemuva kokuzwa omakhelwane…
TELES RELAY Ngo-Apr 24, i-2020 0
Izakhamizi zedolobha laseSao Paulo zathola ukuthambalala okuthe lapho zizwa ukukhala kwengane eduze nasekhaya: usana olusanda kuzalwa lwashiywa ngesihluku futhi lwashiyelwa ukuthi lufele ezindlini zangasese zedolobha. ILanga lidlulisela…
Izinhloli ze-Hubble emthaleni okude ogcwele izinkanyezi zezingane
TELES RELAY Ngo-Apr 14, i-2020 0
UHubble uthathe isithombe esihle somthala okude obizwa nge-NGC 2906. NGC 2906 inenqwaba yezinkanyezi ezinkulukazi ezikhanya ngokugqamile njengoba zishisa uphethiloli wazo. I…
Ukuze bamjezise, ​​abazali bafaka ingane yabo emshinini wayo wokuwasha - ISANTE PLUS MAG
TELES RELAY I-Decc 18, i-2019 0
Uma kukhulunywa ngokuhlukunyezwa kwezingane, kuhlale kukhungathekisa ukubona ukuthi izidalwa ezingakanani okufanele zivikele imiphefumulo engenacala zingadonsa isihluku kube kubi kakhulu. Kwesinye isikhathi ngosizo lomngane, abanye ...